काँग्रेसको साथ पाएपछि डा. भट्टराई विजयी, चार प्रदेशमा चार दल - काँग्रेसको साथ पाएपछि डा. भट्टराई विजयी, चार प्रदेशमा चार दल
काँग्रेसको साथ पाएपछि डा. भट्टराई विजयी, चार प्रदेशमा चार दल
नेपालबहस संवाददाता २०७४, २४ मंसिर, 05:42:44 AM
मंसिर २४, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा गोरखाबाट निर्वाचित भएका छन् ।
नेपाली काँग्रेससँगको सहकार्यमा गोरखा–२ बाट साझा उम्मेदवार बनेका डा. भट्टराईले वाम गठबन्धनका उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पराजित गरी ह्याट्रिक गरेका हुन् ।
यही मंसिर १० गते भएको निर्वाचनको मतपरिणाम गए राति आएको हो । गोरखा–२ मा ६० हजार ११७ मत खसेकामा डा भट्टराईले ३१ हजार ८०७ र उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी श्रेष्ठले २४ हजार ९३३ मत प्राप्त गरे । डा. भट्टराई र श्रेष्ठबीचको मतान्तर छ हजार ८७४ रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस क्षेत्रमा दुई हजार ६३८ मत बदर भएको थियो । डा भट्टराई विसं २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा क्रमशः गोरखा २ र १ बाट निर्वाचित भएका थिए । यस पटकको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएदेखि गोरखा २ चर्चामा थियो र छ । माओवादीका पूर्वउपाध्यक्ष डा भट्टराई र श्रेष्ठ एकै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि कडा टक्कर हुने अनुमान गरिए पनि भट्टराई फराकिलो मतान्तरले विजयी भएका छन्। डा भट्टराईलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिइसकिएको छ ।
गोरखा–१ मा नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका केन्द्रीय सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठ पराजित भएका छन् । उनलाइए भारी मतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता हरिराज अधिकारीले पराजित गरेका हुन् । कुल ६३ हजार ६१९ मत खसेकामा अधिकारीले २९ हजार ८३० र श्रेष्ठले २६ हजार ९३३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
अधिकारीले तीन हजार २१७ मतान्तरले श्रेष्ठलाई पराजित गरे । त्यहाँ चार हजार ३३५ मत बदर भएको थियो ।
चार प्रदेशमा चार दल निर्वाचित
गोरखाका दुई प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमध्ये वाम गठबन्धनले गोरखा– १ र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले गोरखा–२ मा जितेका छन् । यस्तै चार दलका उम्मेदवारले चार प्रदेशसभामा एक स्थानमा विजयी हासिल गरेका छन् । गोरखा–१ का दुई प्रदेशसभा क्षेत्रमा वाम गठबन्धन तथा गोरखा २ का दुई क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी बने ।
गोरखा १ प्रदेशसभा क्षेत्र (क) मा काँग्रेसका नेता धीरन थापालाई पराजित गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता लेखबहादुर थापा विजयी भएका छन् । यस्तै प्रदेश (ख) मा काँग्रेस नेता राजेन्द्र बजगार्इँलाई पराजित गर्दै नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य रामशरण बस्नेत विजयी भए ।
गोरखा २ प्रदेशसभा क्षेत्र (क) मा नेकपा माओवादीकी नेत्री कमला नहर्कीलाई पराजित गर्दै नयाँ शक्तिका नेता हरिशरण आचार्य विजयी भए भने (ख) प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्वसभासद् अमर तमुलाई पराजित गर्दै काँग्रेसका नेता प्रकाशचन्द्र दवाडी विजयी भएका छन् ।
२०७४, २४ मंसिर, 05:42:44 AM
नेकपाभित्र ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने नेपाल र श्रेष्ठको गुट
गृहमन्त्री बादललाई नारायणकाजीको ‘जय नेपाल’
सामाजिक संजालमा डा.बाबुरामको व्यापक आलोचना ! के भेडालाई राष्ट्रिय जनावर मान्छन् त ?